Fampisarahana fahefana :: Minisitra roa tsy maintsy hametra-pialana • AoRaha
Fampisarahana fahefana Minisitra roa tsy maintsy hametra-pialana
Ho banga sahady ny rafitra mpana- tanteraka vokatry ny fisian’ny fifidianana ho solombavambahoaka. Tranga iray tsy ho azo ihodivirana ny hisian’ny fanovana an’ireo mpikambana eo anivon’ny governemantan’ny Praiminisitra, Ntsay Christian, noho ny firotsahan-kofidian’ireo minisitra roa, dia ny minisitry ny Mponina sy ny asa sôsialy ary ny fampi-voarana ny vehivavy, Naharimamy Irma Lucien sy ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Marie Thérèse Volahaingo.
Nahitsy ny valin-tenin’ ny filoha lefitry ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), Rakotonarivo Thierry, omaly, fa « tsy maintsy mametra-pialana eo amin’ny toerana maha minisitra azy ireo kandidà roa ireo raha hirotsaka kandidà amin’io fifidianana io ». «Rehefa mivoaka ny lisitra ôfisialin’ireo kandidà voatazona hiatrika ny fifidianana depiote, ka ao anatin’izany izy ireo dia tsy maintsy mametra-pialana », hoy izy, tetsy amin’ny foiben’ny Ceni, tetsy Alarobia, omaly.
Voalaza fa mety tsy hisolo olom-baovao ireto minisitra roa nanapa-kevitra ny ho kandidà depiote hitondra ny lokon’ ny Vovonana miara-dia amin’ny Filoham-pirenena, Rajoelina Andry (IRD) ireto. Notsipihin’ny filoha lefitry ny Ceni hatrany fa tokony haka fahazoan-dalana miala sasatra eo amin’ny asany avokoa ireo tompon’andraiki-panjakana sivily na miaramila mirotsaka kandidà amin’io fifidianana io. “Izay voatana ao anatin’ny lisitra dia tsy maintsy manana an’izany fahazoan-dalana izany. Tokony hanaja ny lalàna avokoa ny rehetra”, hoy hatrany Rakotonarivo Thierry.
Araka izany, iray volana sy tapany teo izay no lasa dia efa mety hisy sahady ny fanovàna ny mpikambana sasany ao anatin’ny governe- manta voalohany miara-miasa amin’ny Filohan’ny Repoblika. Voalaza fa mpisolo toerana vonjimaika aloha no mety handray ny toeran’ireto minisitra nirotsaka kandidà depiote ireto, mandra-pisian’izay olon-kafa mety hisolo azy ireo. Miankina amin’izay hevitry ny Filoha ihany anefa izany, araka ny voalaza. Ny Filoha Rajoelina Andry, izay efa nilaza fa: « isaky ny enim-bolana ny fanaovana tombana amin’ny asan’ ireo mpikambana ao amin’ ny governemanta ». Miankina amin’ny tombana eo no mety hisian’ny fanovàna ireo mpikambana eo anivon’ ny rafitra mpananteraka na tsia ao anatin’io fe-potoana io.
Fifidianana solombavambahoaka :: Tsy naharakotra an’i Madagasikara ireo antoko malaza